आज बस्ने नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसीको टुंगो लगाउने !
Home/Banner News/आज बस्ने नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसीको टुंगो लगाउने !
१० असार, काठमाडौं । एमसीसीबारे छलफल गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने छ ।
नेकपामा एमसीसीलाई संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने मत बलियो छ । त्यसैले नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकको बहुमतले एमसीसी सम्झौतालाई अस्वीकृत गर्ने सम्भावना बढेको नेकपाका एक नेताले बताए ।
त्यसैले बुधबारको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक महत्वपूर्ण मानिएको छ । यो बैठकले जे निर्देशन दिन्छ, सोही सर्कुलरअनुसार नै नेकपा संसदीय दलले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थायी कमिटीले सम्झौता अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेमा केपी ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने संसदीय दलको बैठकले सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्न सक्दैन ।
थप ३२३ कोरोना संक्रमण पुष्टि
थप १७ जनामा कोरोना देखियो, संक्रमितकाे संख्या २०८ पुग्याे
विद्यार्थीको अभिलेख राख्दै माबि हरिवन, अनलाइन क्लासको वातावरण मिलाई दिन अभिभावकलाई अनुरोध